Ny lahatsoratr'i Christopher Faust momba Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Christopher Faust
Christopher dia tompon'andraikitra amin'ny marketing eran-tany, ny fampandrosoana ny orinasa ary ny paikady mandeha any amin'ny tsena amin'ny Qvidian. Amin'ny maha-mpanatanteraka marketing manerantany azy manana fahaizana lalina momba ny sehatra teknolojia, Christopher dia mitondra rakitsoratra voaporofo amin'ireo orinasa mitombo avo lenta.
Talata, Jona 9, 2015 Talata, Jona 9, 2015 Christopher Faust
Ao anatin'ny tontolon'ny varotra ankehitriny, ny fanamby marobe dia manakana ny mpitarika mpivarotra tsy hanampy ny ekipany hahatratra ny tanjony. Manomboka amin'ny fotoana fohy ny fivarotana varotra vaovao mankany amin'ireo rafi-pitabatabana, mandany fotoana bebe kokoa amin'ny lahasa fitantanan-draharaha ny mpiasan'ny varotra ary kely kokoa ny fotoana fivarotana. Mba hanafainganana ny fitomboana, hampihenana ny tsy fahaiza-miasa ao anatin'ny fikambanana iray ary hampihenana ny fifanakalozana varotra, ny mpitarika ny varotra dia tsy maintsy manangana fomba malaky sy azo ovaina. Digital Sales Playbooks dia singa iray lehibe